Anodzosera & Anodzosa Policy - WoopShop ®
Kubhadhara uye Kudzorera Mitemo
Yese mirairo yako inogona kubviswa kusvikira yatumirwa. Kana tsamba yako yakabhadharwa uye iwe unofanirwa kuchinja kana kubvisa urongwa, iwe unofanira kutitaurira mukati meawa 12. Kana kambani yekuiswa uye kutumira kwekutanga kwatanga, haigone kuregererwa.
Kugutsikana kwako ndiko kunokosha kwedu. Saka, kana iwe uchida kudzorera iwe unogona kukumbira imwe zvisinei nokuti chikonzero.
Kana chero zvikaenda zvisizvo nechigadzirwa uye pachinzvimbo chekudzosera zvinhu, iwe unogona kutibata nesu kuti uzadzise mari.
Kudzoka kumhanya kunopesana nekusimbisa kwedu pakusimba: kudzoka kwega kwega kune kabhoni tsoka. Saka chingotiudza chakashata, tumira pamwe nemufananidzo, uye isu tichakupa mari yako back mune yakazara.
Zvino, kana zvichikwanisika, iwe unogona kupa chigadzirwa chako kune chenzvimbo rubatsiro kana kuti chidzorere icho.
Kana iwe usina kugamuchira chigadzirwa munguva yakatarwa (mazuva 60 kusanganisira 2-5 zuva processing) unogona kukumbira kubhadharwa kana kudzorerwa. Kana iwe wakagamuchira chinhu chakashata, unogona kukumbira kudzorera kana kuburitswa. Kana iwe usingadi chibereko chawakagamuchira unogona kukumbira kudzorera asi unofanira kudzorera chinhu pamari yako, chinhu chacho hachifaniri kushandiswa uye nhamba yekutevera inodiwa.
Mutemo wako hauna kusvika nekuda kwezvinhu zviri mukati mekutonga kwako (kureva kupa hutori husina kutumira kero).
hurongwa Your haana kusvika nokuda aakatipa ezvinhu kunze kudzorwa WoopShop.com (Kureva kwete akachenurwa netsika, kunonoka achishandisa njodzi).
Other aakatipa ezvinhu kunze kudzorwa WoopShop.com
Iwe unogona kuendesa zvikumbiro zvekudzorera mukati memazuva gumi neshanu mushure mekutumirwa. Iwe unogona kuzviita nekutitumira E-mail.
Kana iwe uchibvumirwa kubhadhara mari, ipapo mari yako yekubhadhara ichagadziriswa, uye chikwereti chichashandiswa kushandiswa nenzira yako yekubhadhara, pakutanga kwemazuva 14. Zvigadzirwa zviri kuiswa, mari yacho ichapiwa kumushandi muhomwe yake kuti ishandise mune ramangwana rekutenga.
Kana pane chero chikonzero iwe ungada kuchinjana chako chigadzirwa, zvimwe nekuda kwakasiyana mbatya. Iwe unofanirwa kusangana nesu kutanga uye isu tinokufambisa kupfuura matanho acho. ** Ndokumbirawo usatumire kutenga kwako kudzoserwa kwatiri kunze kwekunge tikupa mvumo yekuita kudaro.